“Musharraxa Madaxweynaha Ayaan La Hadlaya” | Cadceed newssite
“Musharraxa Madaxweynaha Ayaan La Hadlaya”
Dhaqaalaha iyo Sixir Bararka
Somaliland waa dalka ugu liita Mandaqada Bariga Afrika dhinaca dhaqaalaha. Laakiin taas macnaheedu maaha Somaliland way ka khayraad yar tahay kuwa kale. Waxa jira waddamo Somaliland dhul ahaan ka baaxad yar oo ka khayraad yar oo waliba aan bad lahayn dhaqaalahooduna aad u kobcayo, tusaale waxaynu u soo qaadan karna dalka aadka u yar ee Rwanda. Madaxweyne Paul Kagame iyo xukumaddiisu kaliya waxay si wanaagsan u maamuleen dhaqaalahooda yar ee soo gala, waxay ka ilaaliyeen in la musuqo iyo in ay meelo khaldan ku baxdo.
Bal hadda aynu barbar dhigno miisaaniyadda Somaliland oo ugu yaraan 35% lagu bixiyo meelo aan ku haboonayn iyo in la lunsado in kale oo ka badan, halka wasaaraddaha wax soo saarka loo qoondeeyo qadar faro guudkood ah ama halka ay ka qatan yihiin ciidamada iyo shaqaalaha dawladdu.Mudane Musharrax, wax kasta oo aad ku hammiyayso ama aad higsanayso kuuma hirgeli karaan ilaa marka hore aad saxdo siyaasadda dhaqaalaha dalka iyo maamulka lacagaha.
Madaxbannaanida hay’addaha dawladda iyo Ciidamada
Waddamada dunida oo dhan mar kasta xukuumadduhu way isbedbelaan laakiin, shaqada iyo habsami u socodka maamulku uma dhutiyo, sababta oo ah hay’addaha dawladdu(Government institutions) ayaa ah kuwo adag, kana madax bannaan siyaasadda iyo faro gelinta siyaasiyiinta.
Bal u fiirso tusaalahan, laga soo bilaabo dhammaadkii Dagaalkii Dunida ee labaad 1945 dalka Talyaaniga waxa soo maray 56 xukuumaddood laakiin, muddadaa Baanka Dhexe ee Talyaaniga waxa soo maray 6 guddoomiye oo qudha, sidaa awgeed siyaasadda Talyaaniga ee baaxa degaysay wax saamayn ah kumay yeelan dhaqaalaha dalka; haddiise ciidamada qaar ka mid ah madaxtooyada laga dallacsiiyo iyada oo la iska baal marayo nidaamka ciidamada iyo shuruudaha darajada lagu bixiyo ama wasaaraddaha iyo Maxkamadaha oo Madaxtooyada laga xukumo hay’addahaasi sidii laga rabay uma tamariyaan, waxaana ku muraadsada hadba madaxda talada haysa.
Haddaba mudane musharrax si qaranimada Somaliland u taabo gasho waxaa lagaaga fadhiya qorshihii aad ku xoojin lahayd hay’addaha dawladda iyo in aan isbedbedelka xukuumaddaha lala bedelin dadka professionals-ka ah ee khibradda badan u leh maamulka iyo maaraynta hay’addaha dawladda ee muhiimka ah, isla marka waa in laga waantooba in madaxda hay’addaha dawladda iyo shaqaalaha lagu dhiiri geliyo in ay ku milmaan siyaasadda ama ay xubno ka noqdaan xisbiyada siyaasadda.
Dib U Dhaca Doorashooyinka
Distoorka Somaliland qodobka 88-aad wuxuu dhigaya muddada xilka Madaxweynaha iyo Kuxigeenka oo shan sannadood ah, waxa kale oo uu dhigaya in muddada loo kordhin karo haddii nabadgalyo darro ama masiibooyin kale dalka la soo darsaan, hase ahaatee waxa caado noqotay in sabab la’aan muddada loo kordhiyo oo ay kuba sii talo galaan in ay wakhti dheeraad ah xukunka sii haystaan waana distoor jabin loo badheedhay.
Sidaas oo kale Golaha Wakiilladu waxay korodhsiimo ku fadhiyaan 13 sannadood, guurtida iyaga warkoodaba lama hayo. Si kastaba ha ahaatee Somaliland waxay ku fashilantay in distoorka la dhawro iyo in doorashooyinka lagu qabto wakhtiyadii loogu talo galay. Mudane musharrax shicibku waxay doonayaan in ay ogaadaan mawqifkaaga iyo waxa aad ka qaban doonto dib u dhaca doorashooyinka oo caqabad ku noqday hannaankii iyo geedi socodkii dimuqraadiyada Somaliland oo ay markii hore beesha caalamku u arkaysay in ay tusaale u noqon karto dalalka kale ee Geeska Afrika.